Akụkọ - Ọrụ nke valvụ elele bụ iji hụ na onye na-ajụ ihe na-aga na ntanetị na-enweghị nlọghachi
Ọrụ nke valvụ elele bụ iji hụ na onye na-ajụ ihe na ntanetị na-aga n'ihu na-enweghị nlọghachi
Lelee valvụ, nke a makwaara dị ka valvụ elele, valvụ na-agagharị agagharị, valvụ elele ma ọ bụ valvụ elele, ọrụ ya bụ iji hụ na onye na-ajụ ụzọ na pipeline na-agagharị na-enweghị nlọghachi. Mmeghe na mmechi nke valve elele dabere na ike nke usoro iji mepe ma mechie. Valve valvụ bụ nke ngwaahịa valvụ akpaghị aka, valvụ elele na-enye ohere ka onye na-ajụ ya wee na-agagharị n'otu ụzọ nke pipeline iji mee ihe, iji gbochie ihe ọhụụ nke ịghaghachi azụ. O nwere ngwa dịgasị iche iche, enwere ike iji ya na nnukwu calibers, usoro mgbasa ozi dị iche iche na ọdụ ike dị elu.
Ofkpụrụ nke valvụ elele: elele valve na-emeghe na-adabere n'ịdabere na-aga n'ihu iji mepee diski ahụ, otu ihe ahụ mere na azụ azụ na-agba iji kwalite diski ahụ ma mechie, a na-akpọ valvụ elele dị ka valvụ ego, ụzọ valvụ , valvụ na-asọ asọ na azụ nrụgide azụ. Isi ọrụ nke valvụ bụ iji gbochie ntụgharị nke usoro ahụ, iji gbochie ntụgharị nke mgbapụta na igwe na-anya ụgbọ ala na nhapu nke onye na-ajụ ihe. A na-ejikwa ya maka nchebe nchekwa na sistemụ inyeaka ebe nrụgide nwere ike ịrị elu karịa nrụgide sistemụ.
Lelee nhazi ọkwa valvụ: a na-ejikarị valvụ elele iji gbochie iji mgbasa ozi na-agagharị na pipeline. Valvụ ala na valvụ ụgwọ ọbọgwụ sokwa na sistemụ elele ego.
Lelee valvụ nwere ike kewaa n'ime ebuli ụdị, siwing ụdị, diski ụdị atọ:
Eweli ụdị na-ekewa vetikal na kehoraizin 2 iche iche, ndị na-eweli Ọdịdị na-akpụ akpụ tinyere ndị axis.
(1) A na-eji valve elele elele anya na mmiri na drainage injinia chọrọ chọrọ nke pipeline; N'otu oge ahụ, enwere ike itinye ya na nfuli nke mgbapụta ahụ, yana netwọki ọkpọkọ nwere nrụgide dị elu (PN2.5Mpa) bụ ngwaahịa dị mkpa nke valvụ na-enweghị mmetụ.
(2) Ldị valvụ a na-ebuli elu ga-adaba maka mmiri na-ebuli elu na mmiri na mmiri na mgbapụta nke mgbapụta ahụ, ọ gaghị adabara maka oge pipeline.
(3) Igwe elele anya nke kwesịrị ekwesị maka mmiri mmiri, mmiri mmiri, mgbapụta mmiri, ọkachasị maka nsị na sludge system.
A na-ekewa ụdị swing n'ime ụdị valvụ otu, ụdị valvụ abụọ na ụdị multi-valve. A na-ahọrọ ụdị ụdị swing dịka etiti nke ike ndọda.
(1) A na-etinye valvụ elele na-emeghe emepe na-arụ ọrụ na sistemụ ikuku mmiri mepere emepe, nke na-ekwesịghị ekwesị maka paịpụ nsị nwere ọtụtụ nsị.
(2) wingdị swing ụdị valvụ elele valvụ nwere ọtụtụ ojiji, enwere ike itinye ya na mmiri na drainage, mmanụ ala, kemịkal, metallurgy, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na pipeline ndị ọzọ, oge kachasị mma maka mgbochi oghere.
Ngwurugwu efere dị ogologo.
(1) A na-ejikarị valvụ diski okpukpu abụọ mee ihe na pipeline mmiri na-ebuli elu, nke nwere mgbasa ozi na-emebi emebi na nsị mmiri n'iji netwọk ọkpọkọ mmiri.
Igwe nyocha a na-ahụ maka mmiri kwesịrị ekwesị maka mmiri mmiri, mmiri mmiri, mgbapụta mmiri, ọkachasị maka nsị na sludge system.